﻿Download Microsoft Office Proofing Tools 2013 - Bekee from Official Microsoft Download Center
Nbudata a na-arụ ọrụ na programmụ ndị a”
Iji rụnye nbudata a:
Rụnye ngwaọrụ nyocha:
Budata faịlụ ahụ site na ịpị bọtịnụ Budata (n’elu) yana ịchekwa faịlụ ahụ na diski ike gị.
Bido programmụ ntọlite.
Na ibe Gụọ Usoro Ikikere Ngwanrọ nke Microsoft, nyochaa usoro ndị ahụ, họrọ “Pịa ebe a iji nabata igbe nrịbama Usoro Ikikere Ngwanrọ nke Microsoft”, wee pịa Gaa n’ihu.
Ọkachamara ntọlite ahụ na-ebido ma rụnye ngwaọrụ nyocha.
Ka nrụnye ahụ mezuru, malitegharịa mepee ngwa Office gị.
Ntuziaka maka ojiji: Jiri ngwaọrụ nyocha ndị ahụ dị ka otu i si ejibu ya – ugbu a ị ga-ahụ ha maka asụsụ gị arụnyere ọhụrụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịtọ asụsụ nyocha gị ka ọ bụrụ asụsụ ọhụrụ maka iji nlele nsụpe (ọ bụrụ na ọ dị) – iji mụọ otu esi eme nke ahụ, hụ Gbanwee n’etiti asụsụ dị iche iche site na ịtọ asụsụ nyocha
Iji wepu nbudata a:
Na menu Mmalite, tụọ aka na Mwube wee pịa Ogwe Njikwa.
Pịa ugboro abụọ na Tinye/Wepu Programmụ.
Na ndepụta nke programmụ ndị arụnyere ọhụrụ, họrọ Microsoft Office Proofing Tools 2013 – [Asụsụ] wee pịa Wepu, Wepu, ma ọ bụ Tinye/Wepu. Ọ bụrụ na igbe ụbụbọ gosi, soro ntuziaka iji wepu programmụ ahụ.
Pịa Ee ma ọ bụ ỌDỊMMA iji kwenye na ị chọrọ iwepu programmụ ahụ.
Security Update for Microsoft Office SharePoint Server 2007 (KB979445), 32-bit Edition - Igbo
Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB983486) - Igbo
Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB977839) - Igbo
Security Update for Microsoft Office Visio 2007 (KB982127) - Igbo